Mandresy hatrany ny mpankato ny baikon'ny Tompo
"18 Ary hoy Jehovah tamin’i Josoa: Atondroy an’i Ay ny lefona izay eny an-tananao; fa hatolotro eo an-tananao Ay. Dia natondron’i Josoa ny tanàna ny lefona izay teny an-tànany. 19 Dia niroatra faingana ny otrika avy tao amin’ny nitoerany ka nihazakazaka, raha vao natondrony ny tànany; dia niditra tao an-tanàna izy ka nahafaka azy ary nandoro azy faingana tamin’ny afo. 20 Ary niherika ny mponina tao Ay, ka hitany fa, indro, ny setroky ny tanàna niakatra ho any an-danitra, sady tsy nisy handosirany akory, na ho et?, na ho er?; fa ny Isiraely izay nanao tari-dositra ho any an-efitra dia nifotitra namely ny mpanenjika kosa. 21 Fa rehefa hitan’i Josoa sy ny Isiraely rehetra fa efa azon’ny otrika ny tanàna, ka niakatra ny setroky ny tanàna, dia nifotitra izy ka namely ny mponina tao Ay. 22 Ary ireo tao an-tanàna nivoaka hamely azy, ka dia latsaka teo afovoan’ny Isiraely ny olona, fa ny Isiraely sasany teo an-daniny iray, ary ny sasany teo an-daniny iray koa; dia nifandafaran’ny Isiraely teo izy, ka tsy nasiany niangana na dia iray akory aza. 23 Ary ny mpanjakan’i Ay nataony sambo-belona ka nentiny teo amin’i Josoa. 24 Ary rehefa namono ny mponina rehetra tao Ay tany an-tsaha ny Isiraely, dia tany amin’ny efitra nanenjehany azy, ka lavo tamin’ny lelan-tsabatra avokoa izy rehetra mandra-pahalany ritrany, dia niverina tany Ay ny Isiraely rehetra ka namely azy tamin’ny lelan-tsabatra. 25 Ary izay rehetra maty tamin’izany andro izany, na lehilahy na vehivavy, dia roa arivo amby iray alina, dia ny mponina rehetra tao Ay." Josoa 8:18-25
“Atondroy ny lefona …fa hatolotro”. Andriamanitra Ilay Mpiady mahery no nitarika ny ady tamin’ny alalan’ny paik’ady mahavariana (19, 21). Fahendrena sy saina lalina no nomen’ny Tompo an’i Josoa. Ny mpitarika mpankatoa ny toromarika (23, 26, 27) rehetra dia mahazo fandresena. Toy ny tany Refidima tamin’ny andron’i Mosesy (Eksodosy 17:8-12). Rehefa nitazona maharitra ny lefona i Josoa dia montsana ny fahavalo.
Ny fiankinana amin’ny Fanahin’Andriamanitra sy ny fanetrentena eo ambany tànany mahery ihany no ahafantsika mandresy ny fakampanahy, ny ady sy izay olona atrehintsika (Zakaria 4:6). Meteza mandrakariva hihaino sy hotarihin’ny Tompo Ilay mifehy ny zava-drehetra sady manao traikefa be.
Fandinihan-tena: Mitoky amin’iza tokoa aho manoloana ny sarotra?
Fiaraha-miasa mahomby. Ny faneken’ny tsirairay ho mpiara-miombona antoka manoloana ny ady no nampahomby ihany koa izao fanafihana izao. Ny fiaraha-mientana, fiombonana, firaisan-kina maha-te hidera no nisongadina tamin’izao ady tao Ay izao. Niara-nifantoka tamin’ny fahavalo ny fijery ka nanaiky ny fandaminana ny rehetra.
Vavaka : Tompo ô, mampianara anay hanaiky ny lamina eo amin’izay sehatra misy anay.
“Araka izay nandidian’i Mosesy…” (31, 33, 35). Niavaka mihitsy eto i Josoa tamin’ny fanatanterahana antsakany sy andavany ny hafatra nampitondraina. Niombona tamin’ny fisaorana feno fanajana, fanetrentena, fankatoavana an’Andriamanitra ny olona. Nosoratana indray ny dikan’ny làlana, notonina indray ireo fitahiana sy ozona ho tsiaro, fananarana, fampitodihana ny Isiraely amin’Andriamanitra Izay namonjy, nanampy, nampandresy azy ireo.
Fandinihan-tena: Maka fotoana hiderana ny Tompo tokoa ve aho aorian’ny fandresena? Manao ahoana ny famerenana mamaky sy mandinika ny Tenin’Andria-manitra?
Soratra Masina ho an’ny herinandro: Josoa 9:20